Lahatsary Mampiseho Ny Fiantraikan’ny Fahafatesana Eo Am-piterahana Eo Amin’ny Fiarahamonina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Mey 2017 7:16 GMT
Vakio amin'ny teny Français, 繁體中文, 简体中文, Italiano, বাংলা, Español, English
Rehefa mamoy ny ainy mandritra ny fitondrana vohoka, ny fiterahana na noho ny fahasarotana taorian'ny fiterahana ny vehivavy, dia tsy vitan'ny hoe misy fiantraikany eo amin'ny fianakaviana ihany izany fa koa ny fiarahamonina manontolo. Lehibe noho ny antontan'isa ireto horonantsary avy amin'ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona isan-karazany ireto mba hilaza amintsika ny tantaran'ny vehivavy sy ny fianakavian'izy ireo satria miady mafy mba hahatakatra ny antony mahatonga ireo vehivavy marobe maty mandritra ny fiterahana, sy ny zavatra tokony hatao mba hampitsahatra izany izy ireo.
Voalohany, namokatra lahatsary maharitra efatra minitra mitondra ny lohateny hoe Fahaterahana sy Fahafatesana ny Firaisan'ny Ribà Fotsy (White Ribbon Alliance), manazava ny maha olana goavana ny Fahafatesana eo am-piterahana sy ny fomba azo hampitsaharana izany:
Nanatontosa lahatsary maharitra roa minitra ihany koa ny UNICEF mba hanentana momba ity olana ity, miaraka amin'ny dingana 5 izay azo raisina mba hampihenana ny fahafatesana eo am-piterahana: ny fanabeazana, ny fanajana, ny fanomezan-kery, ny fampiasam-bola sy ny fiarovana.
Ao amin'ity lahatsara manaraka ity, Am-pahanginana: Fahafatesan-dReny ao India avy amin'ny Mpanaramaso ny Zon'Olombelona, nankany India ilay mpaka sary Susan Meiselas sy ilay mpitati-baovao Dumeetha Luthra mba hanaraka tantaranà vehivavy iray namoy ny ainy taorian'ny fiterahana:
Ao Però, araka ny notantarain’ity lahatsary notontosain'i Phil Borgers ho an'ny CARE ity, hita fa nahomby ny fandaharana ilay lehilahy Mpiambina ny Fiainana (Watchmen for Lives ) mba hampihenana ny fahafatesana eo am-piterahana; amin'ny alalan'ny fanomezan-kery sy fampianarana ny vehivavy avy ao anatin'ny vondrom-piarahamonina mikasika ny maha zava-dehibe ny fitsaboana mandritra ny fitondrana vohoka sy ny fanaovana tabilao ho an'ny mpampivelona miaraka amin'ny marika fampitandremana rehefa tokony handefa ny vehivavy any amin'ny toeram-pitsaboana – ka marobe ireo mandeha toeram-pitsaboana mba hiteraka, mampihena ny isan'ny maty noho ny fahasarotana mandritra ny fiterahana.
Manana ity lahatsary fanadihadiana, maharitra 18 minitra, mikasika ny Fahafatesana eo Am-piterahana ao Sierra Leone ity ny Amnesty International. Vehivavy iray anatin'ny 8 no mamoy ny ainy eo am-piterahana ao Sierra Leone; ny tsy fahafahana mandoa volam-pitsaboana, ny rafi-pitsaboana zara raha misy, ny tsy fahampian'ireo mpitsabo voaofana sy ny toeram-pitsaboana tsy ampy mpiasa sy zara raha ampiasaina no teny antony. Araka ny nolazain'ireo vehivavy ao amin'ny lahatsary: mahafantatra vehivavy namoy ny ainy nandritra ny fitondrana vohoka na ny fiterahana ny tsirairay ao Sierra Leone.
Ao Aostralia, nanangana ny Fitaovam-Piterahana ireo mpianatra avy ao amin'ny sampana fianarana ho Mpitsabo Mpanampy sy Mpampivelona ao amin'ny Oniversiten'i Sydney ary mizara izany ho an'ireo firenena andala-mpandrosoana mba hiezaka sy hanakana ny fahafatesana tsy tokony hitranga. Ahitana taratasy fingotra apetraka ao ambanin'ny reny, fonon-tanana fandidiana, antsy fandidiana, vovon-dadihazo, savony sy tady hamatorana ny tadim-poitra izany. Ao amin'ny lahatsary, mitantara ny tetikasan'izy ireo sy ny traikefan'izy ireo nahomby tao Bangladesh izy ireo.